/ Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland oo Shaaciyey Muddada loo cayimay joojinta isu-dirista iyo ku-iibsiga lacagta ka yar $100 ee adeegyadda Zaad iyo eDahab. Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland oo Shaaciyey Muddada loo cayimay joojinta isu-dirista iyo ku-iibsiga lacagta ka yar $100 ee adeegyadda Zaad iyo eDahab. – Bank of Somaliland
Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland oo Shaaciyey Muddada loo cayimay joojinta isu-dirista iyo ku-iibsiga lacagta ka yar $100 ee adeegyadda Zaad iyo eDahab.
Tixraaca go’aanka Guddida Heer Qaran ee ka soo tala-bixinta qiima-dhaca Shilinka Somaliland ee ku taariikhaysnaa 20/01/2018 Qodobka la xidhiidhay adeegyada Zaad iyo E-dahab ee dhinaca Dollar-ka.
Tixraaca wareegtadii Baanka Dhexe ee ku taariikhaysnayd 22/01/2018 iyo warqaddii faahfaahinta dheeraadka ah ahayd ee ku taariikhaysnayd 24/01/2018 kuna saabsanayd sidii loo xannibi lahaa isku-dirka lacagaha iyo wax-ku-iibsiga $0 – $99 (Eber illaa Sagaal iyo sagaashan Dollar) ee adeegyada Zaad iyo E-dahab.
Tixraaca codsigii Shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil ee leh adeegyada Zaad iyo E-Dahab ee ku saabsanaa in muddada tobanka cisho ah (10 cisho) ee lagu amray fulinta go’aanka wareegtada ku taariikhaysan 22/01/2018 iyo warqadda faahfaahinta ah ee ku taariikhaysan 24/01/2018 aanay ahayn waqti ku filan.
Tixraaca fadhigii ka qabsoomay 28/01/2018 xarunta Wasaaradda Maaliyadda JSL ee dhex maray Guddida Dawladda iyo Madaxda Labada Shirkadood ee Telesom iyo Dahabshiil ee lagaga dooday muddada ugu habboon ee lagu fulin karo joojinta in macaamiishu isugu dirto lacag ka yar $100 (Person to person) iyo in macaamiishu wax-ku-iibsan karaan lacag ka yar $100 (Merchant payment).
Haddaba, dood iyo falanqayn dheer oo dhex martay labada geesood (Dawladda iyo Shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil) waxa heshiis lagu gaadhay sidan hoos ku xusan:-
In shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil ee leh adeegyada Zaad iyo E-Dahab ay ku fuliyaan go’aankan muddo Shan iyo Afartan cisho ah (45 cisho) gudahood ah oo ka bilaabanta 28/01/2018 kuna eg 13/03/2018 Inshaa Allah.
Go’aankaas oo ay ujeeddadiisu tahay in shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil adeegyadooda Zaad iyo E-Dahab ay ka joojiyaan adeegyada hoos ku xusan:-
In la joojiyo in macaamiishu isu-dirto lacag ka yar $100 (person-to-person), lagana dhigo xaddiga ugu yar ee qof uu qof kale u diri karo $100. Taasoo macnaheedu yahay in la xannibo isu-dirista u dhaxaysa $0 ilaa $99.
In la joojiyo in macaamiishu wax ku-iibsan karaan lacag ka yar $100 (merchant payment), lagana dhigo xaddiga ugu yar ee qof uu meherad wax kaga iibsan karo $100. Taasoo macnaheedu yahay in la xannibo ku-iibsiga u dhexeeya $0 ilaa $99.
Qodobbadaasi waxa ay saamaynayaan Short-codes-ka Zaad-ka ee *880 ee dirista lacagta macmiisha dhexdooda iyo *883 ee wax ku-iibsi meherad. Sidoo kale waxa ay saamaynayaan *888# option-ka 2aad iyo 3aad. Waxa sidoo kale ay saamaynayaan Short-codes-ka E-Dahab-ka ee *110 ee dirista lacagta macmiisha dhexdooda iyo *113 ee wax-ku-iibsi meherad, sidoo kale *111# options-kiisa 2aad iyo 4aad.
Go’aankani ma saamayn doono dhammaan adeegyadii kale ee Zaad-ka iyo E-dahab-ka sida ku shubashada (Mobile recharge), inuu of xisaabtiisa Baanka lacag u wareejisto (Transfer to Bank) ama uu goob adeeg lacagtii Zaad ama E-Dahab ugu jirtay kala baxo.
Annagoo ku rajo weyn inaad sidaa u fulin doontaan go’aanka wareegtada ku xusan, islamarkaana soo qiraal celin doona, naga guddooma salaan wacan.
Guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland